Isikhokelo sokuThengisa simahla sePinterest kwiBrainhost | Martech Zone
Isikhokelo sokuThengisa simahla sePinterest kwiBrainhost
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 13, 2012 NgoMgqibelo, nge-4 kaFebruwari ngo-2017 Douglas Karr
Abantu abavela kwiBrainhost bandiphose umgca wokukhuthaza isikhokelo sabo esitsha, Uyinyusa njani iWebhusayithi yakho ngePinterest kwaye ndicinga ukuba benze umsebenzi olungileyo kuyo!
Nazi izicatshulwa ezi-3 ezivela kwisikhokelo onokufumana ukuba luncedo:
Okwangoku, i-yogurt ye-Chobani, i-Dyson vacuum cleaners, i-Etsy.com, kunye negama elidumileyo le-Nike yezihlangu ezinamaphepha ePinterest. Yintoni eyenza amaphepha abo okanye iibhodi zinomtsalane kukuba AKASETYENZISWA njengamaphepha entengiso kodwa endaweni yoko amabinzana abonakalayo malunga nenkcubeko okanye indlela yokuphila enanditshwa ngabo bakhetha uphawu okanye inkonzo.
Ukuphina kuya kuba yeyona nto ibaluleke kakhulu xa ihlangene nemisebenzi yenethiwekhi yokwenyani (Umzekelo, ngabo bashiya amagqabantshintshi, "repin" kwaye balandela abanye abaya kubona eyona mbuyekezo kwimisebenzi yePinterest). Sukuzingca. Njengawo nawuphi na umsebenzi wentlalontle, ukukhuthaza abanye ekugqibeleni kuya kubakhokelela ekubuyiseleni inceba. Ukuba inethiwekhi ikumzi mveliso wakho, uya kufumana abahlobo abatsha kwaye uqhubeke nokwakha igunya lakho kunye nabo.
Kuya kufuneka uqale ubalandele kwaye wenze yonke imisebenzi eya kuthi izuze iakhawunti yakho. Umzekelo, lo mbhaki sithe sabhekisa kuye kwesi sikhokelo unokulandela abavelisi be-oveni, abenzi bezinto zokubhaka, abanye ababheki, ababhali beencwadi zokupheka, iinkampani zokutya, nokunye okuninzi. Naliphi na kula maqhina anokufumana ezinye izikhonkwane zababhaki ezifanelekileyo kwaye zinike amagqabantshintshi, ngathi, okanye uziphinde. Oku kwandisa kwaye kwandise abaphulaphuli kwaye kwandisa amathuba okugcwala ngakumbi kwiwebhusayithi okanye kwibhlog.
IPinterest ibinokukhula okuhle kunye nokukhanya okuqinileyo. Sibhale malunga ukuzibandakanya kwiPinterest, Yongeza Iqhosha lePinterest lokuncamathela kwiWordPress kwaye wabelane nabanye Iimpawu zabantu bePinterest. Sinephepha lethu lePinterest elibanzi Amanani entengiso.
tags: IngqondoTwilleyIsikhokelo sepinterestIsikhokelo se-marekting
Izithuba eziGunyazisiweyo kwi-WordPress
Ukungenelela kukaRhulumente wase-US kwi-CISPA
Meyi 26, 2012 kwi-3: 13 AM
Ndisebenzise i-pinterest ukukhulisa indawo yam kwaye umphumo wawumangalisa ukuba indawo yam yatsiba ukusuka kwi-#182 ukuya kwi-7 kwiiveki ezi-3.
Iqhinga lelokuba kufuneka iwebhusayithi yethu ifakwe kwaye iphinde iphindwe ngabantu abaninzi le yeyona nto inzima. Uninzi lwabasebenzisi be-pinterest abayi kuphinda benze i-repin xa bengafani nale nto siyiphiniweyo.
Ndenza into elula ukuyikhupha kwi-fiverr kwaye isayithi yam ifakwe ngabantu abangama-75, andazi ukuba angayenza njani ukukhangela ngokuchwetheza i-pinterest kwi-fiverr kwaye uya kuyifumana kwi-TOP. Abanye abathengisi abaninzi banikezela ngenkonzo ye-pinterest kwi-fiverr kodwa kumava am abanako ukwenza iwebhusayithi yam inyuke kwi-SEO. Andazi ukuba kutheni.
Izizathu zokuba kutheni iPinterest ilungile kwi-SEO:
1. Umdla kaGoogle kwimidiya yoluntu ngoko ke ayizukumakishwa njengekhonkco lefama.
2. Emva kokuba i-website yethu iphiniweyo inezibalo ze-backlink ezi-3.
3. Nokuba ungawuxhasi umbhalo we-anchor (ngaphandle kwekhonkco le-url), isalungele ukubeka amagama ethu aphambili kwinkcazo. UGoogle uza KUYIFUNDA!!
4. Kufuneka ubethelele amakhonkco ezikhonkwane zakho ukuze ufumane ukwanda kwewebhusayithi yakho kwi-SEO.